February 19, 2021 Dai 4, 2022 0
Android ndiyo inonyanya kufarirwa nharembozha yekushandisa, inomhanya pamabhiriyoni emafoni kutenderera pasirese. Nekuda kweizvozvo, kunyangwe iyo diki diki yeshanduko muOS ine mukana wekukanganisa mamirioni evashandisi. Asi nekuda kwenzira iyo kunatsurudzwa Android, zvinonzwisisika kana shanduko idzi dzichiita musiyano. Kunyangwe izvo, isu tinogara takatarisira kunotevera hombe Android kuvandudza netariro kuti inounza shanduko huru. Kutaura nezvazvo, Android 12 Yekuvandudza Yekutanga Yekutanga 1 yave kurarama, uye inounza nezvakawanda zvakagadziriswa. Kana iwe ukarasikirwa neyakafukidzwa yedu yapfuura, heino chega chinhu chimwe chete chatinoziva nezve Android 12 kusvika zvino!
Ko Android 12 ichanyatso kunzi "Snow Cone"?
Android 12 inozodaidzwa kuti… Android 12. Google yakadzika mazita ane dhizeti ane Android 10. Saka izvo zvatinowana zvinongova Android 12, zviri nyore, zviri nyore, uye zviri nyore kutevera.
Nezvo zvataurwa, Google inoenderera ichishandisa mazita e-dessert mune yayo yemukati kodhi. Android 10 yaizivikanwa mukati seQuince Tart, Android 11 yaive Red Velvet Cake, uye isu tava kuzviziva izvozvi Android 12 iri mukati inonzi Snow Cone.
Android 12 iri kusunungura rini?
Google haisati yasimbisa zuva chairo rekuburitsa parizvino, asi kambani yakagovana yakatarwa nguva yakatarwa yeiyo Inotungamira Yekutanga Yekuvandudza, Beta, uye Stable kuburitswa.
Iyo Android 12 Yekuvandudza Yekutarisa chirongwa ichaenderera kubva munaKukadzi 2021 kusvika iyo yekupedzisira yeruzhinji kuburitswa kune AOSP uye maOEMs, akarongerwa gare gare gore.
Android 12 Kuongorora Kwekutanga
Android 12 yatove nayo yakaita kekutanga kuratidzika kuburikidza neyekutanga Ongororo Yekuvandudza kuregedzera, iyo yakatanga kubuda muna Kukadzi 18, 2021.
Iyo Yekuvandudza Yekutarisa yeiyo Android 11 yakatanga muna Kukadzi 2020, mavhiki mashoma pamberi peyakajairwa kuburitswa munaKurume, izvo zvakapa vanogadzira nguva yakawanda yekugadzirisa avo maapps kune matsva epuratifomu maitiro uye maAPI akaunzwa mune yekuvandudza. Sezvo denda re COVID-19 risati rapfuura zvachose munzvimbo dzinoverengeka dzepasirose, Google iri kutevera nhambo refu yegore rino futi.
Sekureva kwezita ravo, iyo Android 12 Yekuvandudza Yekutarisa inobvumidza vanogadzira kuti vatange kutama kwepuratifomu uye vatange maitiro ekugadzirisa emaapps avo. Google inotarisirwa kujekesa yakawanda yeshanduko hombe shanduko muma preview ekuzivisa iyo yese ecosystem yezviri kuuya.
Maonerwo Ekuvandudza anonyanya kusagadzikana, uye haana kuitirwa vashandisi vepakati. Google zvakare inochengetera kodzero yekuwedzera kana kubvisa maficha padanho rino, saka usashamisike kana iwe ukaona chimiro mune yekutanga Developer Ratidziro isipo mune inotevera kuburitswa. Ongororo Dzemusimudziri dzinongobvumidzwawo kunotsigirwa neGoogle Pixel zvishandiso, kunyange iwe uchikwanisa kuzviedza pane mamwe mafoni nekuregedzera pasirese GSI, kana iripo.
Mushure mekuburitswa kwePamberi Yekuvandudza Ekutanga, isu tichagadzira nzira yedu kuenda Android 12 Beta kuburitswa, neyekutanga inotarisirwa mu Chivabvu gore rino. Kuburitswa uku kuchanyatso kukwenenzverwa, uye ivo vachatipa zano rakanaka rekuti kusunungurwa kwekupedzisira OS kucharatidzika sei. Panogona zvakare kuve nekuburitswa kudiki pakati peBetas, kunyanya kugadzirisa chero akakosha madhigi.
Pakati penguva ino isu tichatanga zvakare kuona kuburitswa kwemidziyo kunze kwenzira yeGoogle Pixel inotsigirwa. MaOEMs anotanga kutamisa makanda avo eUX kuenda kuBeta vhezheni yeApple 12 uye ivo vachatanga kutora mabasa avo e "Preview" zvirongwa. Nekudaro, izvi zvinoburitswa zvinogona kusarudzira vhezheni kumashure kweaya anowanikwa paGoogle Pixel. Zvekare, zviputi zvinofanirwa kutarisirwa muzvirongwa zvekutarisa, uye nekudaro, zvinokurudzirwa chete kune vanogadzira nevashandisi vemberi.
Android 12 Beta ine Platform Kugadzikana
Mushure meanenge matatu kuburitswa beta, Android 12 ichaita Kugadzikana kwepuratifomu chinzvimbo chiripo pamwe chete neBeta chinzvimbo. Izvi zvinotarisirwa kuti zviitike mu Nyamavhuvhu gore rino. Kugadzikana kwePlatform kunoreva kuti iyo Android 12 SDK, NDK APIs, nzvimbo dzinotarisana neapps, maitiro epuratifomu, uye kunyangwe kurambidzwa kune asiri-SDK maficha apedzwa. Hakuzovi nekumwe kuchinja maererano nemaitiro anoitwa neAndroid 12 kana mashandiro emaAPIs muma betas anotevera. Parizvino, vagadziri vanogona kutanga kukwidziridza maapps avo kuti vatore Android 12 (API Level 31) vasina hanya neshanduko dzisingatarisirwi kutyora maitiro eapp.
Android 12 Sunungura Mubati
Mushure mePlatform Kugadzikana kuvaka, isu tichawana yedu Android 12 Sunungura Mubati kuvaka. Iyi yekuvaka ichave padhuze sezvinobvira kune yakagadzikana kuvaka, asi kwete zvachose yakagadzikana kuvaka. Uku kuvaka kuchazove kuri kutarisira kubata chero matambudziko akakomba anga aenda asina kuzivikanwa kusvika parizvino, kuvaka kusati kwatanga kubuda kune vatengi. Google haina kuzvipira kumwedzi wekuburitswa kweaya anovaka, asi isu tinogona kutarisira imwe mukati Gunyana.
Android 12 Yakagadzikana
Mushure meKuburitswa Mumiriri kunovaka, Google ichaburitsa yekutanga Android 12 yakagadzikana kusunungura. Izvi zvinotarisirwa kuti zviitike mu Gunyana kana pamwe kunyange gare gare. Sezvazviri, zvishandiso zvePixel zveGoogle zvinotarisirwa kuve zvekutanga kuwana Android 12 kuburitswa kwakatsiga.
Kune asiri-Pixel mafoni, isu tinotarisira kuona yakafara yeruzhinji betas panguva ino. Iyo chaiyo nguva yenguva yeiyo imwechete inoenderana nefoni yako uye zvirongwa zveOEM. Mutemo wakanaka wechigunwe ndeyekuti mireza ichaiswa pamberi peiyo yekuvandudza, saka kana iwe uine foni iri pasi peiyo mutengo renji, unogona kutarisira kugamuchira iyo yekuvandudzwa mavhiki mashoma kana mwedzi pasi pemutsara.
Ko mudziyo wangu uchawana Android 12?
Mhinduro kumubvunzo "ko mudziyo wangu uchawana Android 12" zvikuru zvinoenderana nekuti ndeupi mudziyo waunayo.
Google ichapa zviri pamutemo kuvandudzwa kumidziyo iyi:
Izvi zvinotsigirwa neGoogle Pixel zvishandiso zvichawana iyo Android 12 yekuvandudza pazuva rekutanga kwese kuburitswa kutenderera, ichidzivirira chero isingatarisirwi showstopper bugs.
Mhinduro yacho yakaomarara kune zvishandiso zvisina kutsigirwa zveGoogle Pixel uye zvishandiso zvisiri zvePixel. Asingatsigirwe Pixels haazowana aya matsva kubva kuGoogle, asi ivo vanofanirwa kunge vari muchinzvimbo chekuisa iyo GSI panguva yekutanga. Iyo isiri-Pixel chishandiso iri zvachose pahungwaru (verenga: tsitsi) yeOEM uye kuti iripo sei mukati meyakagadzirwa yechigadzirwa. Izvo zvine musoro kufungidzira iwo akareruka UX makanda senge ASUS 'Zen UI ichave yekutanga mumutsetse kusimudzira yavo mireza kune iyo Android 12 base. Mukuenzanisa, anorema matehwe eUX senge Samsung yeUI imwe uye Xiaomi's MIUI vanowanzoita kutora nguva yakareba kuti vadzorezve matehwe avo. Nekudaro, izvi hazviwanzo kuitika, sezvo akareruka UX makanda anga achinonoka zvakaenzana pakutorwa, kana zvisiri zvishoma. Nekudaro, kufungidzira iyo Android 12 yekuvandudza nguva yenguva yeasina-Pixels kunonetsa zvikuru padanho rino.
Ndino dhawunirodha kupi Android 12 kubva?
Pamidziyo yakatsigirwa yeGoogle Pixel uye yeGSI, Google inopa mapakeji epamutemo anotambirwa pawebhusaiti yavo. Unogona kuwana iyo yazvino kurodha pasi kurodha pasi kweApple 12 mune yedu yakatsaurirwa chinyorwa.
Maitiro ekuisa Android 12?
Tine mirayiridzo yekumisikidza inowanikwa yeiyo Android 12 yenzira dzinojairika dzekumisikidza senge Kudzoreredza, ADB, uye Fastboot yezvakataurwa pamusoro apa zvakatsigira zvishandiso zvePixel, uye kuburikidza neGSI kune mamwe ese asingatsigirwe maProjekti eTrble.
Chii chitsva ne Android 12?
Enda kumberi utore chinhu chekudya, chando koni pamwe, nekuti kune toni yeshanduko, ese makuru uye madiki, ari kuuya ne Android 12. Yese Android vhezheni maturu anounza pamwe neshanduko huru. Nekudaro, shanduko pamusoro pemakore mashoma apfuura dzanga dzisinganyanye kusarudzika kupfuura shanduko dzakatsvagisa muhupenyu hwepakutanga hweApple, chinova chiratidzo cheplatform ichikura pamusoro pemakore.
Tiri kutarisisa shanduko nyowani dziri kuuya neese Ekuvandudza Kwekutanga kuburitswa, uyezve kuratidza shanduko dzatakaona mukudonha uye kuita kodhi, asi isu hatisati taona mune ehupenyu anovaka.
Chii chitsva ne Android 12 Developer Ratidziro 1: Ese matsva mushandisi-anotarisana maficha
Nepo isu takazvitsaurira Maoko-e eApple 12 Yekugadziridza Ratidziro 1, zvichiri kufanira kutaura zvese shanduko dzatakaona mune ino posvo.
Mutsva weAccent Ruvara
Android ine yakanyanya kuchena kumashure kubvira Android 5 Lollipop. Rima Themes rakava chinhu neiyo Android 10, nepo Android 11 yakaunzwa pamwe neyakajeka color picker. Iine Android 12 uye zvakanyanya chaizvo neiyi yakatarwa Yekuvandudza Yekutanga, iyo UI iri kutora bhuruu tint mune ese akareruka uye erima madingindira.
Kana iwe uchinetseka nezve kunobva iyo UX yakaonekwa mune leaked screenshots, kune zvimwe zviri kuuya.
Kungofanana nemumvuri weZiviso, iyo yekukiya iko zvino ine denderedzwa rinotenderera kumashure. Iyo yekuratidzira yeiyo pateni yekuvhura inoitawo kunge iri bouncier zvishoma.
Notifications uye Quick Settings Kuchinja
Iine Android 11, Google yakanyorovera padanho rekuzivisa nekuwedzera nzvimbo pakati pekukurukurirana, zviziviso zveapp, uye notisi dzakanyarara. Izvo zvinoenderera pamwe neApple 12, asi panzvimbo yenzvimbo yakajeka chose inoparadzanisa akasiyana mapato, isu tinoona iyo inopindirana kumashure ine yakapenya kupenya kumashure.
Iwo asingashandi Anokurumidza Masetera mataira ikozvino anoratidza mwenje webhuruu bhuru pane grey, asi hapana shanduko inooneka mumifananidzo. Yekukurumidza Masetera mataira 'default odhiyo yachinja, uye Android 12 inounza iyo DND neBattery Saver inoshandura kukadhi rekutanga uku ichisundidzira nharembozha dhigi kuenda kukadhi repiri uye nenzvimbo inoshandura kubva kune yakasarudzika Kurumidza Zvirongwa.
Android 12 zvakare inounza iyo "Deredza Bight Colors" sarudzo, uye nekukurumidza Zvirongwa shandura. Ichi chiitiko chinowanikwa icho chinodzora kupenya kwechidzitiro mukuwedzera kune yakajairwa kupenya kutonga. Iwe unogona zvakare kutsvaira kumusoro kubva kubha yekufambisa pazasi neminwe miviri yekukurumidza kuwana.
Zvinowanikwa Zvirongwa Shanduko
Iyo yekuwanika maseturu menyu zvakare inowana facelift muiyo Android 12. Kunyange zvisarudzo zvekutanga zviri nyore kuwanikwa kubva kune iro peji remberi, dzimwe nzira dzisingawanzo shandiswa senge Fonti Saizi, Kuratidzira Saizi, Ruvara Kururamisa izvozvi zvakakamurwa pasi pezvikamu zvakaita seMavara uye Ratidza. Zvimwe kunze kwekurongwazve uku, mitsetse yakatwasuka yaireva kupatsanura sarudzo dzakasiyana dzemenyu dzakabviswa, zvichipa peji rino kutaridzika kwakachena.
Huru Toggles muZvirongwa
Yechikamu-chakapamhama chidhiraivho, Android 12 iri kuwana yakakura uye yakajeka toggog pamusoro peiyo peji inoiparadzanisa kubva kune mamwe ma toggles pazasi payo. Kunze kwekusimbisa hutongi hwehutongi, isu hatione chero kumwe kushandiswa kweaya masimba. Isu tinogona kuona zvimwe maficha ekugadzirisa chimiro, saizi, uye / kana ruvara rwekuchinja mune ramangwana kuvaka.
Kunatsiridza mune Imwe-Ruoko Usability
Zvakawanda seIne UI uye OxygenOS 11, Android 12 ikozvino ine dzimwe nzvimbo dzisina chinhu pamusoro pechiratidziro, icho chinosundira zvemukati kumatunhu anowanikwa parunhare.
Emojis pa Screenshot Markup
Iyo skrini yekumakisheni menyu inoita kuti iwe uwedzere zvirevo kune iwo ma skrini anotora muApple. Iyo markup menyu iri kuwedzera imwe sarudzo yekurega iwe uchiwedzera emojis padivi pemamwe manotsi kana maododo.
Rongedza sarudzo muShare Sheet
Pamwe pamwe nesarudzo yekuwedzera emojis kuma skrini ekushandisa markup menyu, Android 12 inounzawo sarudzo yekugadzirisa uye / kana kutsanangura chero faira refaira raungave uchitumira. Sarudzo yacho inowanikwa muiyo Android 12 share sheet, uye inounza mamwe markup sarudzo senge skrini yemupepeti.
Android 12 inowana bhatani nyowani yekuzeza ziso risingakoshe. Mune mavhezheni ekare eApple, iwe unogona kuwana icho chikamu nehafu-uchisvetudza ziviso kurudyi kana kuruboshwe divi wobva wadzvanya bhatani renozo. Iwe unogona zvakare kusarudza pakati pekuzeya kwenguva yemaminitsi makumi matatu, awa rimwe, kana maawa maviri. Icho chimiro chakatanga kuwedzerwa mu = Android Oreo, asi iyo hafu-yekutsiva chiratidzo chakaganhurira mashandisiro ayo. Sezvineiwo, chimiro chinoremerwa nekutadza, asi unogona kuchigonesa pasi Zvirongwa> Zvirongwa uye zviziviso> Notifications> Bvumira chiziviso chinotsinzina.
Pamusoro pekuita kuti ziviso yekuzeya iwanikwe, Google inogona kuwana kubvisa hafu-kutsvaira pane Notices neiyi vhezheni yeApple.
Android 11 yakawedzera inoramba ichidzvinyirira midhiya muMumvuri mumvuri kuitira nyore midhiya kutonga. Na Android 12, aya ma media ekudzora ari kuwedzera kunatswa. Chekutanga, midhiya inoridza inotora nzvimbo yakati kurei pane yapfuura ine hombe midhiya mifananidzo uye ingori chiratidzo chechigadzirwa chisina zita rayo.
Kechipiri, iwe unogona ikozvino kusarudza kuti ndeapi maapplication anoratidza mune vezvesimba zvinodzora uye ndeapi asingadaro. Unogona kuwana sarudzo mu Zvirongwa> Ruzha uye kudedera> Midhiya.
Pedyo Mugove weWi-Fi Passwords
Android inobvumira vashandisi kubatanidza kune imwechete Wi-Fi sevamwe zviri nyore nekutarisa QR kodhi. Ipo ichi chimiro chakaunzwa muApple Q beta, Android 12 inoita kuti kugovana kwepassword kuve nyore. Sezvo isu yakataurwa kare, iwe unogona kugovana neWi-Fi mapassword uchishandisa Pedyo Mugove. Izvi zvinogadzira nzira yekubatanidza kune itsva Wi-Fi network isingashande.
Dzorerazve Vibration kune Vanodzora Mitambo
Isu takanga tichitarisira kuona chizvarwa Game Mode pa Android 12 asi izvo hazviripo izvozvi. Nekudaro, Android 12 inopa mukana wekudzosera haptic mhinduro dhata kubva kune iyo smartphone kuenda kune yemupadhi kana mutambo wemitambo kana iwe uri kushandisa imwe. Ipo izvi zvichitaridzika sekuyedza kusimudzira Stadia paApple, iwe unofanirwa zvakare kukwanisa kushandisa mashandiro nevatatu-bato vanodzora vane mota yekudengenyeka.
Google yakaunza chinongedzo chakakura chekupa mvumo manejimendi muApple Q. Izvo zvinonyanya kubatsira kana uchida kuramba wakangwarira pamusoro pekuti maapps anoshandisa sei ma sensors efoni yako. Ikozvino ne Android 12, mvumo dialog bhokisi rinoratidza kumusoro rakadzvanywa zvishoma. Kune mamwe maapplication anoda kuwana maikorofoni kana nzvimbo, iwe zvino unowana nzira pfupi yekutendera "Kugara Uchipinda" muZvirongwa.
Google yakaunza iyo Car crash yekuona chimiro muchimiro chePixel 4's Yega Kudzivirira app. Seizvo zita rinoratidza, chimiro chinoitirwa kuona tsaona uye otomatiki kufonera ekukurumidza mabasa. Mu Android 11, chimiro chakashanduka uye chakaunzwa kune mamwe maPixel zvishandiso. Pa Android 12, tinoona chimiro ichi chichisimudzirwa senzvimbo yepamusoro-soro, kureva kuti, inogona kuwanikwa zvakananga kubva papeji rekutanga reZvirongwa app.
Ipo iyo Crash Detection ficha ichiramba yakaganhurirwa kune dzimwe nyika, nyowani Emergency SOS ficha inosheedza nhare yekubatsira nechimbichimbi kana ukadzvanya bhatani remagetsi kashanu. (Zvikurukuru, iyo mitatu-yekumhanyisa emergency SOS yakagara ichiwanikwa muIndia zvichitevera hurongwa hwehurumende). Iyo ficha zvakare inokutendera iwe kuti uwedzere yakasarudzika SOS nhare yerunhare nhamba kunze kweiyo akajairwa akadai se911 kana 112. Pamusoro peiyo SOS yekufona ficha, iwe unogona zvakare kumisikidza aramu kuitira kuti iwe ugone kuoneka nyore kana rubatsiro ruchisvika.
Dzorerazve Notification Chinzvimbo
MuMusarudzo dzekuvandudza, iwe unogona zvakare kubatidza iyo Adaptive Notifications Chinzvimbo uye Adaptive Notifications kutanga kurega Android ichironga zviyeuchidzo zvako zvichienderana nemabatiro aunoita nemaapplication akasiyana. Na Android 12, iwe ikozvino unowana kugona kuseta iyi chinzvimbo izvozvi kana zvisiri maererano nezvaunoda.
Chii chitsva ne Android 12 Yekuvandudza Yekutanga Yekutanga: Ese matsva mu-kusimudzira maficha
Ichi chikamu chinosanganisira ese maficha anoda akakosha maficha mireza kana mimwe mirairo yekumisikidza mukati mayo nyowani Android 12 Yekuvandudza Ratidziro 1, uye vanoonekwa kunge vari mukuvandudzika panguva ino.
Ongororo: New Lockscreen uye Notifications UI
Kana iwe uchirangarira pre-kuburitswa kufukidzwa kweiyo Android 12, iwe unorangarira kuti isu takanga tawana mifananidzo yekugadzira mockups yeiyo nyowani yekuvandudza, Kuratidzira runyerekupe rwe theming system. Iye zvino ne Android 12 Yekuvandudza Ratidziro 1 mumaoko edu, iyo chaiyo UX iripo yakasarudzika zvakasiyana nezvatakange taona mumifananidzo yakabuda.
Android 12 DP1 yazvino Lockscreen uye ziviso UI
Nekudaro, izvo mockups zvechokwadi zvichiri chaizvo, seiyo new lockscreen uye UI yekuzivisa iripo mukati meKutangisa Ratidziro 1, asi yakaremara nekutadza kwevashandisi. Dzimwe shanduko dziripo futi, asi isu hatisati takwanisa kuvagonesa pane yedu kifaa.
Android 12's in-budiriro yekukiya uye AOD interface
Sekuona kwedu pamusoro, Google iri kuyedza dhizaini uye marongero eiyo lockscreen muAndroid 12. Dzimwe dzeshanduko dzinogona kuitika dzinosanganisira kuisa wachi yedhijitari kumberi-uye-pakati. Maawa ikozvino ari pamusoro pemaminetsi, uye font iri rakakura. Zvichakadaro, iyo At A Glance widget yakaendeswa kukona yepamusoro kuruboshwe. Kana chiziviso chikapinda, wachi inoderera uye inofamba ichienda kumusoro kurudyi kwekiyi yekukiya. Pane iyo Inogara Iri Ratidziro, zviyeuchidzo zvidhori zvinoratidzwa kumusoro kuruboshwe pasi peiyo At A Glance widget kwete pakati.
Ziva kuti shanduko dzichiri zvakanyanya Basa-mu-Progress, uye nekudaro inogona kuve inoenderana neshanduko zhinji. Zvinokwanisika dhizaini iyi ichataridzika kunge iri nani kana Google yagonesa yekuvhara nguva wachi, asi isu hatina kukwanisa kuwana mamwe marudzi ewachi kuratidza mune ino maonero.
Kupfuurirazve, iyo yekuzivisa panji shanduko inoratidzwa mune mockups iri kushandiswawo pairi, uye hezvino izvo zvinoita senge mune ino nhanho yekusimudzira. Panzvimbo peiyo yakajeka yakajeka kumashure yeiyo yazvino UI, Google iri panzvimbo yekuyedza opaque kumashure inoenderana neyako masikati / husiku theme. Ruvara rwemberi rwunogona kuenderana neako Wallpaper kamwe chete Android 12's runyerekupwa theming system ikaenda inorarama. Kana zvirizvo, izvo zvinogona kutsanangura iyo yakajeka beige kumashure inoratidzwa kunze mukugadzirwa mockups isu takatumira. Chero zvazvingaitika, takasimbisa kuti Google iri kushanda pane Wallpaper-based theming system pasi pekodhi-zita "monet", asi isu hatina kukwanisa kuimisa izvozvi.
Android 12's in-budiriro yekuzivisa mapaneru
Kunze kwenzvimbo yakasarudzika, taona zvakare kupenya kwakapenya bhaa kwatakambotaura. Stock Android yazvino kupenya bhaa ibhawa rakatetepa, nepo dhizaini nyowani iri yakawedzera piritsi gobvu. Iwo ekukurumidza Masetera mataira haana kuchinja, kunyange iwo mavara anyangarika kubva kuiyi iteration. Isu tinoziva kuti Google iri kushanda pane imwe dhizaini inoisa iwo mavara pamativi, asi isu hatina kukwanisa kuwana izvo kushanda parizvino.
"Silky Imba" yekumwe kugadzirisa mune Imwe-Ruoko Usability
Kuvaka pamusoro pekuvandudzwa kweOne-Ruoko Rwekushandisa, Android 12 inoita kuti iwe utore zvinhu kumusoro notch ine ficha mureza unonzi "Silky Kumba". Kumisikidza iyo Silky Imba inoratidzira mureza inosundira zvinhu zviri papeji kuwedzera pasi, zvichiita kuti zvive nyore kuwana.
Kuti uedze iyo, mhanyisa iyo ADB raira: adb shell masetingi akaisa epasirese masystem_silky_home ichokwadi
Yakazvitsaurira Imwe-Ruoko Maitiro
Kana kunyangwe Silky Imba isingakuchekere iwe, pane yakatsaurirwa Imwe-Yakabatwa Maitiro aripo mukati me Android 12 Yekugadziridza Ratidziro 1. Ziva kuti chinhu ichi hachiwanikwe kune vashandisi, uye chinoda kuve chinogoneswa zvakasiyana.
Kana yango goneswa, ino yekumisikidzwa kuitisa Imwe-Yakabatwa Maitiro inoshanda zvakanyanya seApple's Reachability Mode mune iyo inodzikira pasi inoratidzwa zviratidzike yakatwasuka chete. Zvimwe zvigadzirwa zveOEM pane Android zvinoda kudzikira pasi zvinoratidzwa zvemukati zvese zvakatwasuka uye zvakatwasuka, nzira iyo Google isingabvumirane nayo panguva ino. Iyo ficha ndeye janky mune yayo yazvino fomu uye zvirokwazvo inoda yakawanda polish isati yagona kuve yakagadzirira yekutanga nguva.
Kupuruzira Screenshots sebasa rave riripo pamatehwe eOEM kwemazera ikozvino, asi haina kumbobvira yaitwa natively mukati meApple sepuratifomu. Iyo ficha yakaonekwa mu = Android 11 Yekutanga Yekuvandudza asi yakadonhedzwa kubva kune yakagadzikana inovaka sezvo yaida rimwe basa. Na Android 12 Yekuvandudza Ratidziro 1, kutsikisa screenshots kwadzoka, asi chimiro chinenge chichiri kuda rimwe basa. Izvo hazvigone kubvumidzwa nekutadza, uye isu hatizive kana chimiro chichava chakagadzirira munguva yekusunungurwa kwakatsiga kwegore rino futi.
Yakavandudzwa Widgets: Widget Kuisira, Kutaurirana Widget
Google iri kuunza kumwe kutarisa kumashure kumajeti gore rino. Kune imwe, Widget Kuisira kunoratidzika kunge kuri basa-riri-kufambira mberi, iine-mu-kusimudzira maficha anoratidza iyo "yakakwidziridzwa" uye "yakakwidziridzwa" vhezheni yePixel Launcher's At a Glance widget. Ichi chimiro chiri kuseri kwechimiro mureza panguva ino uye ichiri kuda rimwe basa risati raigona kuzviita mumaoko evatengi.
Kupfuurirazve, iyo Widget widget yakaonekwa mune Android 12 kudonha iri zvakare mukusimudzira.
Rova zvakasimba Down Gesture kuti Notification Mumvuri
Chimwe chiri mu-kusimudzira chimiro kugona Svetera pasi padyo nebarbar yekudana kuti udane mumvuri wekuzivisa kubva kune chero app. Mazhinji maruncher anotobvumidza vashandisi kudhonza pasi mumvuri wekuzivisa pamwe nekutsveta-pasi chiratidzo pahwindo remba. Asi ichi chiito chitsva chakasiyana sezvo chichiita kuti iwe udane mumvuri wekuzivisa kunyangwe iwe usiri pane iyo yekudzivirira dzimba. Swipe yakanyoreswa kubva pamusoro pechiratidzo chekufambisa kubhawa uchienda kumucheto wezasi kwechiratidziro, saka unogona kutarisira kusada kuita gymnastics yemawoko kuti usvike kubhawa rako rekuzivisa mukuburitswa mune ramangwana.
"Otomatiki" ruzha mamiriro ezaziso
Mu = Android 11, kana iwe hafu-swipe pane ziviso uye tinya pane iyo giya icon, iwe unoona sarudzo mbiri: Default uye Chinyararire. Iyo yemamiriro ekunze inoenderana nehurongwa-hwakazara ruzha uye inogona kubvumira iyo ziviso kurira kana kudedera zvichienderana neyaka sarudzwa ruzha profile Zvichakadaro, kusarudza iyo yekunyarara sarudzo pano zvachose inoremadza kurira uye kudedera kweiyo yakati app - zvisinei neiyo system kurira chimiro. Mu = Android 12, zvakadaro, Google iri kushanda mukuwedzera imwe yechitatu sarudzo inonzi otomatiki, iyo, zvisingaite, inosarudza yega kana chiziviso ichifanira kuita kurira kana kudedera.
Ipo iyo Mufananidzo-mu-Mufananidzo (PiP) ficha yave ichiwanikwa kubvira Android Oreo, yanga yakaganhurirwa maererano nekushandisa. Naiyo Android 11, Google yakazopedzisira yawedzera kugona kudzora hwindo rePiP nekubata nekukweva imwe yemakona ekurudyi, asi chiitiko ichi parizvino chiri kutemesa musoro. Izvo zvinogona kugadziriswa ne = Android 12 sezvo ichiva nyowani pini-ku-zoom mashandiro ePiP, sezvatiri zvakafanotaurwa kare. Kunze kwekureruka kushandura, iwe unozogona zvakare "stash" iyo PiP hwindo parutivi rwechidzitiro kuti ishandiswe isingashandiswe.
Hapana chimwe chezvinhu izvi chinogoneswa nekutadza, uye zvese zviri zviviri zvinofanirwa kuve zvinogoneswa nemaoko.
Zvekuvanzika Zviratidzo: Yakananga Yambiro, Yakavanzwa nekukurumidza Masetera Matera
Tichiri kuona zviratidzo zvinoonekwa zvekushandisa kamera kana maikorofoni zvakatanga kuoneka mu Android 12 inodonha, Google iri kugadzirira kuwedzera yambiro yakajeka yekuvhura maikorofoni uye kushandiswa kwekamera, kunyangwe muapps software Kamera neRecorder. Icho chimiro parizvino chiri muchikamu chekuyedza uye chakaremara nekutadza.
Kupfuurirazve, kune akavanzika ekukurumidza Masetera mataira ekuti mbeveve maikorofoni uye vharira kamera.
Mvumo Management Hub Dhibhodhi
Kudzoka muna Ndira-Kukadzi 2019, isu takakwanisa kuisa maoko edu pane yakavhurika kuvaka Android Q pamberi peGoogle yepamutemo Developer Ratidziro Rokuburitsa. Mukati meiyi kuvaka, tinogona kuona a mvumo nyowani manejimendi manejimendi. Zvakawanda zvatakaona zvakaguma zvaburitswa muApple 10's official solid release, asi rimwe peji rakaramba risipo - iro re "Mvumo yekushandisa Dashibhodhi". Iyi Dashibhodhi yakapa muongororwo wemvumo dzinoshandiswa pane chako chishandiso nemaapp akasiyana siyana, zvichikupa zano rakapamhamha kuti uone chinosara chakabvumirwa (kana kushungurudzwa) mvumo pane chako kifaa. Sezvambotaurwa, mukuru anovaka Android 10 uye gare gare kubvira ipapo yanga isina iyi Mvumo Yekushandisa Dhibhodhi. Pa Android 12 Yekuvandudza Ratidziro 1, iyo Mvumo Yekushandisa Dhibhodhi yaita kudzoka, asi chete sechinhu chemukati chishandiso chekugadzirisa zvinangwa.
Zvirinani Kupatsanura Screen Multitasking nemaApp Pairs
Kupatsanura-skrini sechinhu chave chiripo paApple kwemakore akati wandei izvozvi, asi zvakanetsa kuita. Samsung yakatora mashandiro ichienderera mberi neayo "App Pair" chimiro pane iyo Edge pani pane Imwe UI. Unogona kusarudza maviri maapplication aungade kuvhura panguva imwe chete wobva wadzvanya pane inogumira icon kuti uite kudaro nekukurumidza. LG uye Microsoft zvakare vaive nemifungo yakafanana kune avo vaviri-skrini zvigadzirwa, kunyangwe maitiro eSamsung akashanda zvakanyanya pane zvakajairika mafoni. Google yakave nerunyerekupe yekuunza ino App Maturu mashandiro muApple, uye Android 12 inouya nemabasa, zvisinei kuti akavanzwa uye haawanikwe pachena. Isu takakwanisa kubatanidza maviri maapplication uye nekuavhura iwo panguva imwe chete kupatsanura-skrini tichishandisa mirairo yeShell, asi hatina kukwanisa kuziva maitiro ekuwedzera iyo paired icon kune iyo homescreen parizvino.
Pixel 5 Yakananga: Dhinda Tapira Kudzoka Gesture
Kana iwe uine Pixel 5, Google ine bhonasi ficha yekubikira iwe muiyo Android 12 Yekuvandudza Yekutanga 1. Unogona kuwana nyowani Double Tap Dzokera Gesture pasi pezvirongwa> Sisitimu> Maitiro. Dhinda-pombi miravidzo inobvumira mushandisi kubaya kumusana kwefoni yavo kuti aite / anotangisa huwandu hwezviito. Aya ma gesture haadi chero yakakosha Hardware. Ivo vanovimba nefoni yekumhanyisa uye gyroscope kuti vaone mushandisi pombi. Parizvino, iko-kwekubata chiratidzo kunopa iwe shanu sarudzo dzaunosarudza kubva:
Tamba uye umbomira midhiya
Ona zvichangoburwa maapp
Iwe unogona zvakare kugadzirisa iyo yekunzwa kwepombi kune yako kufarira. Iyo ficha inoita senge isingashande mukuita kwayo kwazvino, hazvo. Imwe pfungwa yekucherechedza ndeyekuti iyi yakatanga kuonekwa muiyo Android 11 Yekuvandudza Yekutanga 1 asi haina kumbozviita kune yekupedzisira vhezheni.
Chii chitsva ne Android 12 Yekuvandudza Ratidziro 1: Ese achangobva kuziviswa shanduko kune vanogadzira
Pamusoro pezvinhu zvatakaona, Google yakazivisawo shanduko dzakakosha dzinoverengeka sechikamu chavo chiziviso chepamutemo.
Kune boka reshanduko dzakakosha, kusanganisira AVIF mufananidzo rutsigiro, kupfuma kwemukati kuisa, akawanda-chiteshi odhiyo ekuvandudza, ART kuburikidza neProjekiti Mainline, uye nezvimwe zvakawanda. Isu tinokurudzira zvikuru kuti iwe utaure kune chiziviso ichi sezvo ichienda mune irinani tsananguro nezve ese eaya backend shanduko.
Zvimiro zvakaburitswa asi zvisati zvagara mu Android 12
Isu tanga tatova nezano rakanaka rekuti titarisirei neApple 12 kunyangwe pamberi pe = Android 12 Yekugadziridza Yekutanga 1 yaipinda munzira yedu. Asi OS kuvandudza idenderedzwa rakaomarara, uye izvo zvinowanzo kuburitswa zvinogona kana kuti zvisingaite kuti zvidzokere mukuburitswa. Tichiri mumazuva ekutanga kwazvo eApple 12, saka pane mukana wekuti mashoma akanakisa eaya akachinja shanduko anoita nzira yavo mukubuditswa kwakadzikama pakupedzisira - kana vangangodaro, inogona kuenda nenzira mbiri.
Nguva Dzose Pakuonesa Shanduko
Hatina mamwe ma skrini ekugovana, asi isu tinoziva izvozvo Google iri kugadzirira kugadzirisa dhizaini yeiyo Inogara Iratidziro mu Android 12. Mamwe mashoma e-ekuchinja-shanduko anosanganisira kuchinjisa macomputer ekuzivisa eiyo Inogara Iri Ratidziro saka ivo havachisiri mukati meiyo nyowani dhizaini, kuchinjisa wachi yekutarisa uye smart nzvimbo kuti iwirirane kumusoro, ichifambisa pasi yekubuda bhatani uye muridzi ruzivo pazasi pekiyi yekukiya kwete pane yekukosha kuona, uye kuwedzera iwo Mavara ePixel Ekutamba manje kumavara anotenderera pane anokiya skrini. Panogona zvakare kuve neatsva AOD / kukiya skrini shanduko, asi isu hatizive kuti vachataridzika sei. Nekudaro, aya marongero uye shanduko shanduko ingangove isipo muiyo Android 12 Yekuvandudza Yekutanga inovaka sezvo Google iri kugadzirira kuviga shanduko idzi uchishandisa "GX" (Google Experience?) Yekufukidza.
Iko shanduko inounzwa neAndroid 12 kuUX inotarisirwa kuve chikamu che "mugwagwa unoenda kuNhau NEXT" kuedza. Google's Material Dhizaina magadzirirwo akachinja zvakanyanya kubva pakuvambwa kwavo kwekutanga. Chazvino uno, nhungamiro dzakashanduka kukurudzira makambani kuti atore mazita avo pamusoro peKugadzirwa Kwezvinhu. Semuenzaniso, maGoogle maapps anowanzo tevera iyo kambani "Chinyorwa Chemusoro" dhizaini. Kunyangwe isu tisingazive chaizvo kuti ndedzipi shanduko kune dhizaini Zvinhu "ZVINOTEVERA" zvichaunza izvozvi, isu tinotarisira kuti zvinyatsoita. Isu tinopokana kuti Chinyorwa "CHINOTEVERA" richava iro zita chairo renzira nyowani dzekugadzira; mushure mezvose, Google haina kubvira yataura nezveMusoro wenyaya Wayo shanduko se "Chinyorwa Dhizaina 2.0" kunze kunyange isu tichiziva ndiwo matauriro avakaita mukati. Isu hatizivewo kana Chinyorwa CHINOTEVERA shanduko chingasanganisira zvinopfuura kungozivisa chete.
Zvekuvanzika Zviratidzi uye Zvekuvanzika Kumisikidza Shanduko
Screenshots pazasi inoratidza izvo zvinoita sekunge zvakavanzika zviratidzo. Vashandisi vanogona kugashira yambiro muzvimiro zvebhodhi zviratidziro pese apo app iri kushandisa kamera kana maikorofoni. Kubaya pamadhigiramu emamiriro ekuratidzira kunogona kuratidza pop-up kumusoro kwescreen iyo inokuudza chaizvo mapurogiramu ari kushandisa kamera kana maikorofoni. Google yanga ichiedza izvi zvakavanzika machipisi kweanopfuura makore maviri ikozvino, saka zvingava zvakanaka kuvaona vachizopedzisira vaonekwa mu Android 12. Aya makamera nemaikorofoni zviratidzo zvinogona kutobvumirwa kuisa mu Android 12 inovaka, nemagwaro akaburitswa anoratidza kuti zviratidzo izvi zvinofanirwa kuratidzwa zvakanyanya kumusoro kwechidzitiro. , gara uchionekwa pese panosvika kamera kana maikorofoni uye inofanirwa kuve iine ruvara rwakaenzana pane zvakasikwa.
Iyo "Yekuvanzika" marongero mukati meApple aigona zvakare kuona revamp ine Android 12. Iyo nyowani yekuvanzika magadzirirwo inogona kunge iine mamoggogi ekudzima kamera uye nekunyaradza maikorofoni zvachose, kuwedzera kune yekushandura nzvimbo yekuwana. Unogona kutodzima ma sensors ese pane chako chishandiso uchishandisa iyo "sensors off" Kurumidza Kuisa tile, asi iyi tile inogona kuratidzwa chete kana iwe wagonesa Developer Sarudzo. Android 12 inogona kuita kuti switch ishandise mushandisi-isvike nekuvaisa munzvimbo dzekuvanzika.
Nyowani Bubble Mifananidzo
Android's Bubble ficha yakagadzirirwa kuwana mashoma UI tweaks ane Android 12. Yeimwe, Google irikugadzira nyowani nyowani dzemabhuru. Kuchave nekutsvaira / kuyera pasi kweanopopota kana uchikwevera kunze kwakawedzera bubble, yakapfava kuwedzera / kudonha mifananidzo, uye shanduko yakapfava pakati pemabhuru. Mune mamiriro emamiriro ekunze, mabhuru anozoratidzwa akatwasuka kurudyi / kurudyi kurudyi pane kutwasuka kumusoro. Google iri kugonesa inochinjika bubble sizing uye inogonesa yakamisikidzwa kumisikidzwa, maviri maficha anonzi akagadzirirwa Chrome OS uye yayo ARC ++ mudziyo.
Nepo chimiro ichi chisina kuburitswa mukudonha, Google yakaratidza chinangwa chekuvaka "isina kuomarara" vhezheni of Apple's App Yekutarisa Transparency chimiro. Google irikutsvaga kuenzanisa zvakavanzika neinoshambadzirwa nharaunda. Nekudaro, vhezheni yeGoogle yechinhu ichi inogona kunge isinganyanye kuomarara uye inogona kusazoda vanogadzira kuti vawane mvumo kubva kuvashandisi kuteedzera yavo data.
Iyo nzira iyo Google inogona kutora yeApple inogona kunge yakafanana neiyo yakarongerwa iyo Chrome webhu bhurawuza. Google yakazivisa kare hurongwa hwekubvisa wechitatu-bato makuki mu Chrome mukati memakore maviri. Panzvimbo iyoyo, bhurawuza rinoshandisa imwe nzira iyo inobvumidza kumwe kushambadzira kwakanangana nediki isinganetsi yekuunganidza data. Vanoshambadzira vanozokwanisa kunongedza mapoka evanhu vane zvakafanana zvido, asi kwete vanhu vamwe chete.
Yakawedzerwa Theming System
The yakawedzera theming system mu Android 12 inogona kubvumidza vashandisi kuti vachinje iyo yekutanga color uye yekukasira mavara uye zvakare kushandisa iwo mavara kune akatsigirwa echitatu-bato kunyorera. Iyo OS inogona kutopa iwo madimikira mazano anoenderana nepepuru, iyo inogona kutsanangura iyo beige tones pane yakaburitswa Android 12 skrini. Iyo Wallpaper-based theming system yakadomwa zita rekuti "monet", uye dingindira rakatarwa rinoratidzwa mumifananidzo yakaburitswa inogona kunzi "Silika", uye inogona kushanda semumiriri weGoogle weiyo Android 12 yakasimbiswa theming system. Musoro wenyaya unoitawo kunge chikamu cheiyo "SilkFX" app. Iyo nyowani "Silk" dhizaini inozoenderanawo neApple yeTV (kureva. Google TV / Android TV), asi isu tisingazive kuti ichaita sei paTV.
The wechitatu-bato app "Pluvius" inogona theme yako foni zvichibva pane yako yazvino Wallpaper.
Android 12's yakadzama theming sarudzo ingangosiyana kubva kuchiratidzo kuenda kuchiratidzo sezvo maOEMs anopa vashandisi yavo yavo tsika mavara. Nekudaro, iwe haungakwanise kudhiza rako rakasarudzika color scheme. Mavara aunosarudza anogona kuratidzwa mukati meAppleapp, asi chete kana vagadziri vakasarudza kuvatsigira. Izvi zvinowedzeredzwa theming ficha inogona kutobvamburwa kana Google ikaona shanduko dzisingaenderane nechavo chiratidzo cheOS, saka usanyanyo gadziridzwa nepfungwa izvozvi.
Android YeRuntime Resource Kufukidza (RRO) Kuvandudza
Android's Runtime Resource Overlay (RRO) ficha iri kuwana kusimudzira kukuru. MaRRO akagara ari mapakeji eAPK anodikanwa kuti aiswe pachigadzirwa asati agoneswa, asi Android 12 inofanirwa kukwanisa kugadzira asiri maAPRRs pane-iyo-nhunzi. Zvichava zvinonakidza kuona kuti izvi zvinoshandiswa sei, asi isu tiri kufungidzira kuti izvi zvichavhura kugona kuburitsa yakawanda yemitambo madingindira ayo asingade kuiswa sehurongwa-hwero maapplication. Parizvino, mazhinji epakeji mapakeji anoshandisa iyo RRO / OMS API akaiswa semastatic mapakeji mune ekuverenga-chete zvikamu. Kugadzira RRO mapakeji pane-iyo-nhunzi zvinogona kuve izvo zvinoita iyo Android 12's nyowani "monet" theming system (yataurwa pamusoro) mukana.
Tiri kuona kutaura nezve "tsamba bhokisi" chimiro iyo Google iri kuyedza nayo. Aya ma "letterboxes" anoita kunge inzira nyowani yekuisa maapps mufuremu / hwindo, uye iwo anozove nemakona akatenderedzwa akakomberedzwa uye inogadziriswa kumashure kara. Hatina chokwadi zvachose kuti izvi zvichashandiswa nei, zvakadaro.
Zvechitatu-bato kunyorera izvo zvisingaite vane yavo yekupwanya skrini, Android 12 inogona kuburitsa yakasarudzika splash screen hwindo iyo ingave yakajeka kana yerima zvichibva pane yazvino DayNight theme theme. Izvi zvinogona kuve chikamu cheyakazara kuyedza yekuvandudza iyo app kuvhura ruzivo.
Yakarambidzwa Networking Mode
Google yakaonekwa ichishanda pa nyowani inorambidzwa network network chimiro cheiyo Android 12, asi inogona kunge isiri iyo system-level firewall iwe yaungangodaro uchida kuti ive.
Kana iyi nhare itsva inorambidzwa yakavhurwa, maapplication chete anobata mvumo yeCONNECTIVITY_USE_RESTRICTED_NETWORKS ndiyo inobvumidzwa kushandisa network. Sezvo iyi mvumo inogona kupihwa chete kune yakasarudzika system kunyorera uye / kana maapplication akasainwa neOEM, kuwana network kunovharirwa kune ese maapplication akaisirwa nemushandisi. Nekubudirira, izvi zvinoreva kuti iwe uchiri kugashira kusundira notices kubva kune maapplication uchishandisa Firebase Cloud Messaging (FCM), sezvo izvi zviziviso zvichifambiswa kuburikidza nerombo rakanaka Google Play Services app inobata iyo inodiwa mvumo. Zvakadaro, hapana chimwe chirongwa - kusasanganisa mashoma emamwe maapplication - anogona kutumira kana kugamuchira data kumashure.
Iko hakuna chinoratidza kuti Google ichave ichivhura iyo ficha kuti vashandisi vazvigadzirire yavo yavo yekubvumidza kana blocklist yemapurogiramu.
Hibernating Zvisina Kushandiswa Zvishandiso
Imwe yezvibvumirano zvakaonekwa mukumhanyisa kune iyo Android 12 Yekuvandudza Yekutanga inoratidza izvo Google inogona kunge iri kuwedzera nyowani app hibernation ficha. Iyo app hibernation system sevhisi "inogadzirisa app hibernation nyika, nyika maapplication anogona kupinda izvo zvinoreva kuti haasi kunyatso shandiswa uye anogona kukwidziridzwa kuitira kuchengetedza. ” Hatizive iyo parameter inoshandiswa kuseta iyo hibernation / yekushandisa-isina kushandiswa mamiriro eapp. Isu tinoziva kubva pakuzvipira kuti iyo app hibernation ficha inozoisa otomatiki kujekesa maapp cache emaapp uye kudzima ayo ekuumbiridza artifact mafaera. Huwandu hwenzvimbo ichasunungurwa nekubvisa mafaera aya haungave wakawanda, kunyanya uchienzaniswa nehukuru hwemafaira emifananidzo yakachengetwa kana mavhidhiyo. Nekudaro, pamidziyo yepasi-pekupedzisira ine zvidiki zvekuchengetedza mukati, kuchengetedza makumi emamabhegi kuchasunungura nzvimbo kune akawanda emamwe mapikicha.
Autorotation pane Android inovimba nefoni gyroscope uye accelerometer. Asi mune dzakawanda zviitiko muzuva rose, isu hatigare tichiwana mhedzisiro inodiwa pachinyorwa. Google inogona kunge ichitarisa izvi semukana wekushandisa imwe yeayo AI mashiripiti ne "Smart autorotate" chimiro mu Android 12. Tsananguro ishoma, asi chimiro chinogona kushandisa kamera yakatarisa yakatarisana nekamera kuti uone mamiriro emusoro wako usati wachinja maitiro.
Makanda eOEM akatora misiyano yakasiyana ye "Game Mode" uko chishandiso chinoshandura mashoma marongero kuti zvive nyore kutamba mutambo kwenguva yakareba, pasina kuda kuti mushandisi achinje shanduko idzi pese pavanopinda kana kubuda mutambo. Android sepuratifomu haina chero Game Mode, asi izvo zvinogona kuchinja ne Android 12. Iyo nyowani "GameManager sevhisi" mu Android 12 inorondedzerwa se "sevhisi yekugadzirisa zvine chekuita nemitambo", ichibvumira iyo "kubata mutambo mamiriro uye kuenderera data" mukumisikidza kutanga. Ruzivo rwedu rwazvino rwakabatana pano, asi tinogona kufungidzira zvakare kuti iyi inogona kunge iri API yemitambo yekumisikidza yakakosha "mutambo wemitambo" pane zvishandiso. Iyi "mitambo yemitambo" inogona kubata mamwe marongero akakosha sekupenya otomatiki, autorotation, Usakanganise modhi, nezvimwe.
API yevatongi vakabatana neBluetooth
Google iri kusanganisa iyo nyowani yeBluetooth API muApple 12 inozorega mitambo ichiona iro bhatiri danho revabatanidzi veBluetooth. Izvi zvinoita kuti mutambo ukuzivisa iwe kana mudzvanyiriri wako ave kuda kufa, achikupa iwe nguva yekuwana nzvimbo yekumbomira wozodzoreredza yako controller.
Mutambo Mutungamiriri Rumble Rutsigiro
Android izvozvi inopa chete kutsigirwa kushoma kwekutetemera kwakabatana kwakabatana michina, kuvadzora kuenda nekudzima, uye pasina nzira yekudzora kukura kweakadengenyeka kana kuburitsa tsika vibration mhedzisiro. Asi izvi zvinogona kuchinja ne Android 12, se kunatsiridzwa kwekuisa mudziyo rumble rutsigiro ari pamakadhi. Code yakatumirwa kuAOSP inowedzera mukutsigira amplitude kudzora uye inovhura nzira yekugadzira tsika vibration mhedzisiro.
Zvisinei, ramba uchifunga kuti izvi zvibvumirano hazvina kubatanidzwa. Saka vangangodaro vasinga zviite munguva yekusunungurwa kwekupedzisira Android 12.
Android 12 ichagadzirisa chimwe chezvinhu zvidiki zvinotsamwisa muApple. Chero nguva iyo Unicode painowana emojis nyowani, tinofanirwa kumirira iyo OS yekuvandudza kuti isvike nharembozha tisati tamboita kuti ive chikamu chedu Internet yekutsvaga. Google iri kuita kuti zvive nyore kugamuchira emojis nyowani nekudzisanganisa kubva ku Android system inogadziridza. Izvi zvinoreva kuti emojis nyowani inogona kuwedzerwa kumafoni nekungosundira fonti yakagadziridzwa panzvimbo yekuda izere nesystem yekugadzirisa chete shanduko iyi.
Iyo commits yeshanduko iyi yakabatanidzwa nzira pamberi pesimba kuburitswa, saka chimiro ichi chingangouya ne Android 12.
Purogiramu inonzi Ultra-Wideband
Samsung yaive yekutanga Android OEM kuisa tekinoroji yeUltr-Wideband (UWB) kubatsira munzvimbo chaiyo yemukati yezvigadzirwa zvemumba zvine hungwaru uye nekumhanyisa-peer-pe-peer kufambisa dhata. Xiaomi akarongawo kukwira pabhodhi neUWB, uye isu tinogona zvirokwazvo kutarisira mamwe akawanda maOEMs eOmemi kuti asvetukewo muchikepe. Kutarisana neiyi nyowani tekinoroji, Google yakawedzera API kuAOSP kutsigira UWB.
Iyo Galaxy S21 + uye Galaxy S21 Ultra tsigira ultra-wideband yekutsvaga uye kuvhura sarudza mota.
Iyo API yakawedzerwa munguva yekuiswa mu Android 12, asi inoramba ichionekwa kana ichinyatso kubatanidzwa. Ramba uchifunga kuti maUWB APIs anoiswa mucherechedzo seSystemAPIs izvozvi, saka ivo havazokwanisike kune vechitatu-bato maapplication, asi isu tisina chokwadi chekuti nei ichi chirambidzo chiripo.
"Isa Mazano" kuti ikurumidze kuisirwa kwakakosha maapplication pamafoni matsva eApple
Kutamira kune imwe nhare yeApple marwadzo anga achingodzikiswa zvishoma mumakore ese aya. Google yakaonekwa ichishanda pa "install hints" sechinhu chekutendera zvitoro zveapp kuti zvisarudze kuti ndeipi compiler firita yekushandisa kana kuwanda uchiisa maapp Iyi ficha inonyanya kuitirwa chitoro cheapp, kureva Google Play Chitoro mune ino mamiriro, ayo anozowana kugona kuisa pamberi-anonyanya kushandiswa maapps kubva kudhara chishandiso uye woamisa iwo nekukurumidza pane iyo nyowani foni.
Kusununguka-kwe-Kushandisa Kwechitatu-Bato App Zvitoro
Android seOS inobvumira vashandisi kuisa maapplication kubva kune zvimwe kunze kweGoogle Play Store. Asi riini Epic Mitambo yakamhan'ara kumatare eGoogle (uye Apple), kambani yakachema-chema kuti vashandisi vanofanirwa kupa mvumo iyo yaishandisa mutauro usinganyadzise pakuisa maapplication kunze kweiyo Play Store. Kupfuurirazve, nzira dzakadai sedeloading dzinoshaya mukana wekunyarara nekumisikidza maapplication, kuisa zvitoro zvechitatu-bato pane zvakasarudzika zvinopesana neGoogle Play Store.
Muenzaniso wekusimudzira iwe waunofanira kupfuura kuti ukwanise kurodha pasi Anwendung pane Android.
Kare kumashure, Google yakadzorera pamusoro peEpic. Mukuzivisa kwemhinduro, Google yakataura kuti ichave iri kuita shanduko muApple 12 izvo zvinoita kuti zvive nyore kuti vanhu vashandise zvimwe zvitoro zveapps pane avo madhizaini vachichenjerera kuti varege kukanganisa matanho ekuchengetedza ane Android munzvimbo. Iyo kambani haina kugovana kuti ndedzipi shanduko idzi, asi isu tinofanirwa kutarisa nezviyero zvakaunzwa zvekureruka-kwekushandisa kune yechitatu-bato maapplication ezvitoro pane Android 12.
WireGuard VPN rutsigiro muLinux kernel
WireGuard inotevera-gen VPN protocol iyo inoratidza zvimiro zvemazuva ano zvekunyora uye ine yakachengeteka, inonzwisisika kodhi yekodhi. Mushure mekuiswa kwayo mu Linux Kernel 5.6, Google yawedzera rutsigiro rweiyo protocol kune Android 12's Linux Kernel 4.19 uye Linux Kernel 5.4 muti. Izvi zvinoreva kuti kernel yekumhanyisa yeWireGuard inotsigirwa mu Android 12 pane zvishandiso zvine Linux Kernel 4.19 uye 5.4. Nekudaro, zvinoramba zvichionekwa kuti Google ichawedzera APIs kuumbana neiyo kernel module.
Ndeapi mafungiro ako pane Android 12? Ndezvipi zvinhu zvaunonyanya kufarira nezvazvo, uye chii chaungade kuona chimwe kunze kwezvakataurwa pamusoro apa? Tizivisei mune zvakataurwa pazasi!
The post Android 12 "Snow Cone": Zvese zvatinoziva kusvika parizvino nezveGoogle inotevera inotevera gadziriso, ine Yekuvandudza Yekutarisa 1 shanduko! yakatanga kutanga xda-vatadzi.
Android (inoshanda sisitimu)Android vhezheni nhoroondo